Qoyskii Caasho ilyaas oo cadaalad darro uga guuray Magaaladda Gaalkacyo (Sawiro) – Radio Daljir
Abriil 24, 2019 9:18 b 0
Waxaa magaalada Gaalkacyo iyo Guud ahaan Soomaaliya ka baxay Qoyska Marxuum Caasho Ilyaas oo aheyd Gabadhii 12 jirka ee dilka iyo kufsiga loogu geestay Waqooyiga Magaalada Gaalkacyo ee Xarunta Gobalka Mudug.
Qoyskaan oo Gabadhooda la dilay 24kii bishii 2aad ee Sanadkaan ayaa ilaa hada helin Cadaalad waxaana lagu wargeliyay in la sii daayay qaar kamid ah dadkii lagu tuhunsanaa Kufsiga iyo dilka waxaana la xaqiijiyay in Shalay Gelinkii dambe ay ka baxeen Soomaaliya.
Qaar kamid ah dariska Qoyska Caasho Ilyaas ayaa sheegay in reer Ilyaas ay u baxeen gudaha dalka Itoobiya gaar ahaan dhulka Dowlad degaanka Soomaalida Itoobiya kadib markii ay sheegeen in aysan ku sii noolaan karin Gaalkacyo oo ay kala kulmeen dhibaato ballaaran.
Ka bixitaanka Soomaaliya waxay ku sheegeen 3 qodob oo kala ah.
1) In aysan ku sii noolaan karin Guri iyo Magaalo ay ku waayeen Gabadhoodii, walina aysan ka go’in Uur ku taallo xanuun badan oo ay ka dhaxleen dilka iyo kufsiga Caasho.
2) Si ay Kufsi iyo dhib kale uga badbaadiyeen Carruurta u hartay oo ka bixi waayay Cabsi kana haray Waxbarashadii sida dugsiyada iyo Iskuuladii.
3) in ay ka niyad jabeen kana quusteen Cadaalad ay helaan kadib markii Madaxweynaha Puntland amarkiisa lagu sii daayay dalkana looga dhoofiyay 2 nin oo aad looga shakisanaa Kufsiga iyo dilka Caasho.
Qoyskaan ayaa waayay Cadaaladii ay sugayeen waxaana la sheegay in uu ka lumay Xariirkii ay la lahaayeen mas’uuliyiinta Gobalka Mudug iyo kuwa Gaalkacyo ee Puntland si ay ula socdaan Kiiska Gabadhooda laakiin taas badalkeeda lagu wargeliyay in la sii daayay eedeysanayaashii qaarkood.
Soomaaliya kama shaqeeyo garsoor Caadil ah waxaana dhibaatooyin badan Wajaha qoysas badan oo loo geestay dhibaatooyin kala duwan. Dhibaatada ugu badan waxaa Wajahaya Hablaha Soomaaliyeed oo kufsi iyo dil loo geesto iyadoo markaasi lagu dhameeyo Xeer dhaqameed.
Wasaaradda Boostada & Isgaarsiinta oo soo bandhigtay Halbeegyada u qabsoomay